Isikhwama sokudla kwezingane esidayisa yonke impahla Umkhiqizi Nomhlinzeki |Yingzhicai
Izikhwama zokuma yizo ezenza imikhiqizo ime eshalofini noma etafuleni kuyilapho igcwaliswa ngemikhiqizo ngaphakathi, njengomunye wabahlinzeki besikhwama abahle kakhulu e-China, sinezinketho ezigcwele zesikhwama sokuma esizikhethela amakhasimende ethu, njengenye yezinto ezihamba phambili. imikhiqizo emisha yesikhwama sokupakisha ephuma eminyakeni yamuva eyenza izinto eziningi eziwusizo embonini yokupakisha.Izikhwama zokudla zezingane zifana nonkulunkulu kulabo bazali abahlala bematasa.
Into Isikhwama sokudla kwezingane
Ukusetshenziswa Ifanele ukudla kwezingane, okufana ne-Fruit puree, ushizi unama, ukudla okuhambisanayo kwezinsana nezingane ezincane.Ummbila unama noma okuthize
Izikhwama zokuma yizo ezenza imikhiqizo ime eshalofini noma etafuleni kuyilapho igcwaliswa ngemikhiqizo ngaphakathi, njengomunye wabahlinzeki besikhwama abahle kakhulu e-China, sinezinketho ezigcwele zesikhwama sokuma esizikhethela amakhasimende ethu, njengenye yezinto ezihamba phambili. imikhiqizo emisha yesikhwama sokupakisha ephuma eminyakeni yamuva eyenza izinto eziningi eziwusizo embonini yokupakisha.Izikhwama zokudla zezingane zifana nonkulunkulu kulabo bazali abahlala bematasa.Izikhwama ziqukethe okuhlanzekile okulungele ingane.Ngokusho kodokotela bezingane, izikhwama zokudla zibaluleke kakhulu ngoba ziyashesha futhi ziyinhlanganisela ephelele yokuphila okunempilo.Lokhu kungenxa yokuthi izikhwama zokudla zihlanganisa izithelo, imifino, kanye nokudla okunamaphrotheni ngokushesha okwenza kube nomsoco.
Isikhwama Sokudla Kwezingane kanye ne-Yogurt Spout Pouch iyiphakheji yokudla engcono kakhulu yezingane nezingane.Ukupakishwa akuyona nje isisindo esilula futhi kulula, kodwa futhi kuphephile ukusetshenziswa kwezingane.
izikhwama zithathe umhlaba wokudla kwezingane ngesivunguvungu.Zilula, aziyinyumba futhi zinezinhlobonhlobo zama-flavour nezinhlanganisela zokudla.Izikhwama zisebenziseka kalula futhi zinikeza abazali ukuguquguquka, zinikeza ukudla okuphathekayo okufanelana nempilo ematasa imindeni eminingi enayo namuhla.
Okwedlule: isikhwama sokuhlanza
Olandelayo: esukuma isikhwama